အဆိုပါဖုန်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆု | ထိပ်တန်းပေါက်ဆိုက်ကိုကာစီနို | £5အခမဲ့ |
နေအိမ် » အဆိုပါဖုန်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆု | ထိပ်တန်းပေါက်ဆိုက်ကိုကာစီနို | £5အခမဲ့
အခမဲ့ဖုန်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆုဆုကြေးနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ပူးတွဲ Chips လောင်းကစား Get!
အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ပတ်ပတ်လည်ပူးတွဲလောင်းကစားနှင့်ယနေ့ခေတ်ထိုအတူချက်နဲ့ clubhouse ၏အလငျး၌ထုတ်လုပ်အကွာအဝေးအတွင်းကစားအများဆုံးပျံ့နှံ့အဆက်မပြတ်ကြားတစ်ချန်ပီယံဖြစ်ပါသည်. အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ပတ်ပတ်လည်နှစ်ဆယ်ရာစုကတည်းကနှင့်အနည်းငယ်မျှသာသရုပ်ြပလူမှုရေးအဖြစ်အပျက်မှသတ်ခံရမှကြီးမားသောဂုဏ်သတင်းကိုဆည်းပူးခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ယခုကျယ်ပြန့်ကိုကောင်းကောင်းသိ get ဆုံပျံ့နှံ့ခဲ့သည်. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လောင်းကစားအဆစ်အပေါ် 'အမှ Coronation ကာစီနိုမှာအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ပတ်ပတ်လည်ကစား ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာသည်သူတို့ကကမ်းလှမ်းတိုးတက်မှုနှင့်ဆုဖြစ်ပါသည်. အဘယ်အရာကိုမျှအွန်လိုင်းနှင့်အတူအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း၏ပတ်ပတ်လည်အပေါ်အာမခံဖို့အခမဲ့လောင်းကစားပူးတွဲချစ်ပ်ရတဲ့သူထက် သာ. ကောင်း၏ အဆိုပါဖုန်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆု ဆုလာဘ်. အဆိုပါဖုန်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆုအနည်းစနစ်မှ Coronation ကာစီနိုသောအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကလပ် website တွင်ပွင့်လင်းသည်.
ဟလို, ထိုစာမျက်နှာ Down ကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆုအစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စားပွဲတင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းကာစီနိုအမှတ်တံဆိပ်ထဲက Check အောက်တွင်သို့မဟုတ်အဆိုပါဖုန်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမို Read မှ Continue.
အခြားဖောက်သည်အွန်လိုင်းငွေသားပူးတွဲအတွက်အဆက်မပြတ်ကစားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ, သူတို့ချမှတ်ခြင်းနှင့်အသစ်စံချိန်အားဖြင့်စတင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. တစ်ပန်ကာဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုအစားစံချိန်တင်ဖွင့်လှစ်ဘို့ clubhouse ပေးဆောင်ထက်သောအဆိုပါဖုန်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆုဖောက်သည်ကမ်းလှမ်းကျပ်အဖြစ်, အလောင်းကစားပူးတွဲစစ်ရေးအ redirection ကစားရန်သင့်အားအခမဲ့ကလပ်ချစ်ပ်ပြီးရှိကြတယ်.
အခမဲ့ကွိုဆိုအပိုဆုနှင့်အတူ Start Get
ဤရွေ့ကားချစ်ပ်မတူကွဲပြားအဆက်မပြတ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်မည်. အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ပတ်ပတ်လည်မှအသစ်ဖြစ်၏နှင့်၎င်းတို့၏သီးခြားပိုက်ဆံသွင်းထားဖို့မမျက်နှာသို့လှည့်မယ်ဆိုရင်, အဆိုပါမိုဘိုင်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆုအထူးသဖြင့်အရေးပါသည်. ပထမဦးဆုံးကဤဆုကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါသောအွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေအလွယ်တကူရပြန်နိုင်သည့်မဖြစ်မနေအာမခံအဖြစ်လူသိများသောအာမခံ၏ညီခုနှစ်တွင်.
အဆိုပါမိုဘိုင်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆုအလားတူအောင်မြင်စွာမတူကွဲပြားနည်းလမ်းများအတွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်. သင့်အနေဖြင့်ရွေးနှုတ်သည်သင်၏စတိုးဆိုင်ဖြစ်စေခြင်းငှါအပ်နှံ tab ကိုအပေါ်ရကူပွန် code ကိုရိုက်ထည့်ပါနဲ့ click နှိပ်နိုင်ပါတယ်. သင်ကယ်တင်စတိုးဆိုင်နှင့်ဆုချီးမြှင့်ဖြည့်စွက်ရတဲ့အခါတစ်ဦးမီးလောင်အတွက်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်
သင်ပိုမိုရရှိအာမခံစဉ်သင်မိုဘိုင်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆုဆုလာဘ်ဤ codes တွေကိုသုံးပြီးအတွက်ပွပိုပြီးအခွင့်အာဏာကိုသင့်ရလဒ်ကိုဖြစ်လိမ့်မည်.
အဆိုပါဖုန်းကာစီနိုအခမဲ့အပိုဆု ထိပ်တန်းပေါက်ဆိုက်ကိုနဲ့မှ Coronation ကာစီနိုမှာ. အခုတော့ Play & ပိုငွေအနိုင်ရ.